Home News Sarkaal Sare oo ka Cabanaya Mushaar La’aan&Wasiiro uu Lahadlay oo Si Xun...
Sarkaal Sare oo ka Cabanaya Mushaar La’aan&Wasiiro uu Lahadlay oo Si Xun ula Dhaqmay
Sarkaal sare oo tirsan Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay In uu cabasho ka yahay taliyaha Cusub ee Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed oo uu sheegay in uu kaga maqan yahay mushaar 9 Bilood ah.
Dhamme Cabdi Sheekh Cali Raage oo ah Kabtan Ka Tirsan Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed aya sheegay in isaga uu Ciidamada Asluubta ka tirsanaa mudo 46 Sano ah isla markaana uu Ciidnka Asluubta ku soo biiray Sanadkii 1972 sidoo kalena Saraakiisha Ciidamada iyo Dableyda hadda la qoray ay isku mushaar yihiin.
Isaga oo ka hadlayay Cabashada uu qabo ayaa wax uu sheegay in xiligi Basiir Goobe uu taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed uu ka maqan yahay mushaar 9 Bilood ah, Saddex Bilood oo Guno ah iyo rashin intaba xiligaasna uu taliye ka ahaa Ciidanka Asluubta Soomaaliya taliyaha cusub ee hadda la wareegay xilka ee Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe).
Sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada kale ee dowladda aysan kala sineyn mushaar ku qaadashada darajooyinka maadaama iyaga Saraakiishooda iyo ciidamada intaba ay isku mushaar yihiin.
Ugu dambeyn waxa uu sheegay in shalay xili ay socotay Xaflada xil wareejinta taliyaasha Ciidamada Asluubta Soomaaliyeed uu doonayay in Wasiirka Cadaalada uu kala hadlo cabashada ay qabaan balse taasi ay u suurtagali weysay kadib markii Madaxdi oo dhan ay meel cidlo ah uga dhaqaaqeen.